May 9, 2015 - 10:31 PM
News Code : 689145
သခင်မကြီး သည် (အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ) မိုမေနီများ၏ မိခင်မွန် အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြား ပါတယ်။ မဟာ တမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ပထမဦးဆုံးကြင်ယာတော်မြတ် ဖြစ်ပြီး ဟဇရသ်ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ မယ်တော်မွန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးသည်(ဗေအ်စသ်) မတိုင်မီ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သခင်မကြီးသည် ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးများတွင် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) သည် မြတ်အလ္လာဟ် ၏ နဘီတမန်တော် ဖြစ်ကြောင်း အပေါ် အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြင် မိမိ ပိုင် ဥစ္စာပစ္စည်းများ ကို ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ သာသနာ့ပြု လမ်းစဉ်အတွက် လှူဒါန်း ပေးကမ်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ် ကြီး (ဆွ) ဟာ သခင်မကြီး (စ.အ )နှင့် အတူ ဘဝတည်ဆောက်နေချိန် တွင် အခြား အိမ်ထောင်မပြုတော်မူခဲ့ပေ။ သခင်မကြီး (စ.အ) ဝဖာသ် ဖြစ်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်းသခင်မကြီး ကို ကောင်းမြတ်သည်တမ်းတမှုဖြင့် အလွန်တရာ ပင် တမ်းတ ခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးနှင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) တို့ အိမ်ထောင် ၏ရလာဒ် အဖြစ် သားတော် ၂ပါး ကာစင်မ် နှင့် အဗ်ဒွလ္လာဟ်၊ သမီးတော် ၄ပါး ဇိုင်နဗ် ၊ရွတ်ကီယာ ၊ အွန်မ်မေကိုလ်စွန်မ်၊ဖွာတွေမာ (စ.အ) တို့ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ အီဗရာဟီးမ် မှအပ အားလုံးသည် သခင်မကြီး(စ.အ)၏ သားသမီး များဖြစ်ကြပါတယ်။
သို့သော်အိန္ဒိယ နှင့်မြန်မာ ရှီအာအေမာမ်မီယာများ အကြား ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ သမီးတော် လေးပါး မဟုတ်ဘဲ တစ်ပါးတည်း ရှိသည်ဟု ခံယူထားသူများလည်း ရှိပါတယ်။
ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးသည် ဟိဂျရသ်မတိုင်မီ ၃နှစ် အလျင်သက်တော် ၆၅ နှစ်တော် တွင် မက္ကာဟ် မြို့ တော်တွင် ဝဖါသ် ဖြစ်တော်မူ ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) သည် သခင်မကြီး အား ကဗဲရ်စတန် နေ မိုအလာတွင် သဖ်နာ တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး အစ္စလာမ် ဘာသာ ဝင် ဖြစ်ပုံ
မြောက်များစွာသော သမိုင်းကျမ်းအကိုးအကားများ မှ သခင်မကြီး (စ.အ)ကို ပထမဦးဆုံး အစ္စလာမ်သာသနာ ကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာသူ အဖြစ် တင်ပြ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဗ်နေအဗ်ဒွလ်ဗရ် အနေဖြင့် မောင်လာ အလီ (အ.စ) အား ပထမဆုံး အီမာန် ယူလာသူ ပြီးနောက် ဟဇရသ် ခတီဂျာ သခင်မဟု ခံယူထားပါတယ်။ တစ်ချို့ ကမူ သခင်မကြီးခတီဂျာ (စ.အ) ၊နှင့် အတူ ဟဇရသ်အလီ (အ.စ)တို့ကိုပထမဆုံး အီမာန်ယူ လာသူများ ဟုလည်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ချို့ အနေဖြင့် တမန်တော်မြတ် ကြီး (ဆွ) နောက်မှ သခင်မကြီးခတီဂျာ (စ.အ) ၊နှင့် အတူ ဟဇရသ်အလီ (အ.စ)တို့ နမာဇ် လိုက်ဖတ်သည့် ဝါကီယာဖက်သို့ ညွန်းပြပြီး သခင်မကြီး (စ.အ ) နှင့် မောင်လာ အလီ (အ.စ) တို့ သည် ပထမဆုံး နမာဇ်ဝတ်ပြု ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားကြပါတယ်။
ابن خلدون، تاریخ‏ ابن‏ خلدون، ج‏۲، ص۴۱۰؛ ابن کثیر، البدایةوالنهایة، ج‏۳، ص۲۳؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۴، ص۱۸۱۷
ابن اثیر جزری، اسدالغابه فی معرفة الصحابه ، ج۶، ص۷۸.
ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۴، ص۱۸۱۷.
مقریزی، امتاع الاسماء، ج۹، ص۸۸ .
ابن اثیر جزری،أسدالغابه فی معرفة الصحابه ،ج‏۶، ص۷۸؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۳، ص۱۰۸۹
အစ္စလာမ် သာသနာ အတွက် သခင်မကြီး (စ.အ) ၏ လှုပ်ရှားမှုများ
သခင်မကြီး (စ.အ) ဟာ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ကို၊လိုလေးသေးမရှိ အောင် ငွေရေးကြေးရေးဖြင့် ကူညီ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဤအတွက်ကြောင့်လည်း ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အားချီးမြှင့်ထားတော်မူသည့် နေအ်မသ် တော်များ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရဟ် ၉၄ အာယသ်တော် ၈ မှာ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်တော်မူထားပါတယ် ။
((အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်သည် အသင်အား ပစ္စည်းဥစ္စာချိုတဲ့သူအဖြစ် တွေ့တော်မူရာ ပစ္စည်း ဥစ္စာပြည့်စုံသူ အဖြစ် ပြုတော် မူခဲ့ပါသည်။ ))
တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) သခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း မိန့်တော် မူပါတယ်။
((မည်သည့် ပစ္စည်းဥစ္စာမှ ကျွန်ုပ်ကို ဂျနာဗေ ခတီဂျာ (စ.အ) ၏ပစ္စည်းဥစ္စာ လောက် အကျိုးအမြတ် မင်္ဂလာ ကိုမပေးခဲ့ချေ။ )) အလာမာမဂျလေစီရေးသားသီးကုံးထားသည့် ဗေဟာရ် ကျမ်း အတွဲ ၁၉ စာမျက်နှာ ၆၃
အစ္စလာမ်မီရီဝါရတ်တော်များအရ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) သခင်သည် အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး၏ ဥစ္စာပစ္စည်း စည်းစိမ်များကို အကြွေး မဆပ်နိုင်သူများ ကို အ ကြွေးဆပ်ပေးရာတွင် ၎င်း ၊ အဖမဲ့ ကလေးများနှင့် မရှိနွမ်းပါးဆင်းရဲသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ ရာတွင် ၎င်း အသုံးချတော်မူခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိရပါတယ်။
အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး၏ ဥစ္စာပစ္စည်း စည်းစိမ်များကို ရှေအ်ဗေ အဘီသွာလစ်တွင် အပိတ်ဆို့ခံထားရချိန်တွင်လည်း ဗနီဟရှင်မ် ကို ထောက်ခံကူညီရာတွင်အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ရီဝါယတ်တော် တွင်လာရှိသည်မှာ ဟဇရသ်အဗူသွာလစ်ဗ် သခင်ကြီး (ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဦးရီးတော် မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ဖခမည်းတော် ) နှင့် ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီးတို့ ၏ဥစ္စာပစ္စည်း ၊စည်းစိမ်များအားလုံးကို အစ္စလာမ့်သာသနာတော်အားထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် အပိတ်ဆို့ခံထား ရသူများကို ကူညီရန်အတွက် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းလာရှိပါတယ်။ အလာမာမဂျလေစီရေးသားသီးကုံးထားသည့် ဗေဟာရ် ကျမ်း အတွဲ ၁၉ စာမျက်နှာ၁၆
ရှေအ်ဗေ အဘီသွာလစ်တွင် အပိတ်ဆို့ခံထားရချိန်တွင် ဟကီးမ်ဗင် ဟေဇာမ် (သခင်မကြီး ခတီဂျာ (စ.အ) ၏ ဦးရီး၏သားတော် မောင်(သို့) အစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲတော်သူ ) မှ ကုလားအုတ်များ အပေါ် ဂျုံများ ၊ စွန်ပလွန်သီးများ ကိုတင်ဆောင်ပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းအန္တရာယ်များစွာ ဖြင့် ဗနီဟာရှင်မ် ထံသို့ အရောက် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရစူလ်လီ မဟော်လသီ ဘသာပြန်ရေးသားထားသည့် အေဗ်နေဟရှမ်း၏ ((စီနသွလ်နဘီကျမ်း ) ) အတွဲ ၁ ၊စာမျက်နှာ ၂၂၁
သခင်မကြီး (စ.အ) ၏ ဤကဲ့သို့သော် ကြီးမားလှသည့် ထောက်ခံ ကူညီမှုများသည် ရိုးဖြောင့်မှု ရိုးသားဖြူစင်မှု ကို အခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ အတွက်ကြောင့် လည်း အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင် အနေဖြင့် သဘောတူ နှစ်မြို့ လက်ခံတော် မူပြီး ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) သခင်အား ချီး မြှင့်ခဲ့သည့် နေအ်မသ် တော်ကြီးများ၏ စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းတော်မူခဲ့ခြင်း ၊ထုတ်ဖော်မိန့်တော် မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်မကြီး(စ.အ) အနေဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ်ပြုခဲ့သည့်ကျေးဇူးတော်များမှာ ဆပ်မကုန်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူး သိတတ်သူတိုင်း ငြင်းကြမည် မဟုတ်ချေ။
ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး ၏ အဆင့်အတန်း
ခတီဂျာ သခင်မကြီးသည် ဖြူစင်သန့်ရှင်းသည့်အမျိုးသမီးကောင်း ၊ဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာ ကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးသမီး ၊ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျရှိတဲ့အမျိုးသမီး ၊ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျနာဗေဂျာဗေရ် ဗင် အဗ်ဒွလ္လာဟ်အန်ဆွာရီ မှ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ထံ မှတဆင့် ဆင်ပြန်ထား သည် ရီဝါယတ်တော် တစ်ခု လာရှိပါတယ် ။ထိုရီဝါယတ်တော်တွင် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) မှ ဟဇရသ်ခတီဂျာ (စ.အ) ၊ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ (စ.အ) ၊ဟဇရသ်မယ်ရန်းမ် (စ.အ) နှင့် ဟဇရသ် အာစီယာ သခင်မတို့ အား ကမ္ဘာ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးသျှောင် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော် မူထားပါတယ် ။ အေဗ်နေကစီးရ်ရေးသားပြုစုထားသည့် (( ဒေယာသိုဝန်နေဟာရာ ကျမ်း)) အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၁၂၉
ထိုပြင် ခတီဂျာ သခင်မကြီး(စ.အ) အားကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) မှ ကမ္ဘာပြီးပြည့်စုံသူအမျိုးသမီးများမှ တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၊ အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးများမှ တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူထားချက်လာ ရှိပါတယ်။ အေဗ်နေကစီးရ်ရေးသားပြုစုထားသည့် (( ဒေယာသိုဝန်နေဟာရာ ကျမ်း)) အတွဲ ၂ ၊စာမျက်နှာ ၁၂၉ နှင့် ဇဲဟ်ဘီရေးသားထားသည့် ((သာရီခိုလ်အစ္စလာမ်ကျမ်း အတွဲ ၁၊ စာမျက်နှာ ၂၂၉
အစ္စလာမ်မီ ကျမ်းဂန်များတွင် သခင်မကြီး ၏ (အလ်ကာဗ်တော်များ) မှာ သွာဟေရာဟ်၊ဇကီးယာဟ် ၊ မရ်ဇီးယာဟ်၊ ဆယက်သ် ဒါဟ်ဟေနေစာအေ ကိုရှိင်းရှ် ၊ခိုင်ရွလ်နေစာ၊ ကြီးကျယ်မြင်မြတ်သည့် အမျိုးသမီးကြီး၊ ထိုပြင် (ကွန်နီယသ်တော်များ) အဖြစ် အွန်မ်မိုဇ်ဇဲဟ်ရာဟ် ၊ အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာရန် ကျမ်း -
ابن اثیرجزری،أسدالغابه فی معرفة الصحابه، ج‏۶، ص۸۳.
مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۱۸۹.
ابوالحسن بکری، الانوارالساطعه من الغرّاء الطاهرة، ص۷.
ကဗဲရ်စတန် နေ မိုအလာ သခင်မကြီး (စ.အ) ကို ဒဖ်နာထားသည့်နေရာ
သခင်မကြီး(စ.အ) သည် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏အမြင်တွင် အထူးနေရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းဂန် များ တွင် အကြိမ်ကြိမ်လာရှိပါတယ်။အချို့ ကျမ်းဂန်များအဆိုအရဆိုလျင် သခင်မကြီး (စ.အ) သည် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး ၊အ ရိုးသားအမှန်ကန်တကာ အရိုးသား အမှန်ကန်ဆုံးသူ တိုင်ပင်ဖော် နှင့်အတိုင် ပင်ခံ ၊ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အပေါ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာမှုကိုပေးသည့် အရင်းအမြစ် အဖြစ်လာ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) သည် သခင်မကြီး ဝဖါသ် ဖြစ်တော်မူပြီးနောက် ပိုင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ သခင်မကြီးကို တမ်းတ လွမ်းဆွတ်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်မကြီးဟာ အနှိုင်းမဲ့ ပမာမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ဆို ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အား သခင်မကြီး (စ.အ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ခတီဂျာ ဟာ ကိုယ်တော်၏ အသက်ကြီး ကြင်ယာတော် တစ်ပါးထက် မပိုပါဟုပြောချိန်တွင် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) အလွန်အမင် စိတ်ဆိုးတော်မူပြီး ဤကဲ့သို့ အဖြေပေး မိန့်လေ၏။
(( အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် ကျွန်ုပ်အတွက်ခတီဂျာထက်သာလွန်ကောင်းမြတ်သည့်ကြင်ယာတော် ကို မရွေးချယ်ထားတောမူပေ ။ သူမဟာ ကျွန်ုပ်ကိုအားလုံး ပယ်ချ ၊ခေါင်းရှောင်နေချိန်တွင် ဝန်ခံ ခေါင်းခံ တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်သူမှ မဖေးမှ မကူညီချိန် မှာ သူမ ဟာ ဖေးမှ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကို မိမိ ဥစ္စာပစ္စည်း များ နှင့်ကူညီဖို့ အားလုံး တွန့်ဆုတ်နေချိန်တွင် သူမသည် မိမိ ဥစ္စာပစ္စည်း များ ကိုကျွန်ုပ် လက်ထဲအပ်တော်မူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ )) အေဗ်နေအဗဒွလ်ဗဲရ် ရေးသားထားသည့် ((အေစ်သီအာဗ်ကျမ်း )) အတွဲ၎ ၊စာမျက်နှာ ၁၈၂၄
သခင်မကြီး(စ.အ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး အေဗ်နေဂျောင်စီ ရေးသား ထားပါတယ်။ သခင်မကြီး သည် အသိနှင့် သတိရှိပြီး သန့်စင်သူ ၊နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို မြတ်နိုးချစ်ခင်သူ ၊အမှန်တရားဖက်မှ လိုက်ပေး သူ၊ကြီး ကျယ်မြင့်မြတ်သူ ၊ ခေတ်နှင့်အညီတွေးခေါ်တတ်သူ၊ (တရားဝင်) အချစ်မေတ္တာ ကဏ္ဍတွင်ပြီးပြည့်စုံသူ ၊တိုးတက် အောင်မြင်သူ ၊စသည်တို့ဟာ သခင်မကြီး၏ ဂုဏ်အင်္ဂါတွေဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။
သခင်မကြီး (စ.အ) ဟာ လူငယ်ဘဝတွင်လည်း လူကြိုက်များသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦး ၊ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ဦး အဖြစ် ဟေဂျာဇ်(ယနေ့ဆော်ဒီ) နှင့် အာရပ် လောက ကို လွမ်းမိုးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာပြီးနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချမ်းသာမှုကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရှိင်းရှ် အကြီးအကဲများ ၊ ဂုဏ်သရေ ရှိသူများ သခင်မကြီး(စ.အ) အား လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် လာရောက်တောင်းဆိုခဲ့မှုကို သခင်မကြီး (စ.အ) မှ လက်မခံတော်မူခဲ့ချေ။ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ)အား မိမိခင်ပွန်းသည် အဖြစ် ရွေးချယ်လက်ခံပြီး၊ ရုပ်ပိုင်း (ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာများ )ထက်နာမ်ပိုင်းက အရေးကြီး ကြောင်း ၊ အောင်မြင်မှု ဆိုသည်မှာ လောကုတ္တရာတွင် အောင်မြင်မှသာ အောင်မြင်မှု ဖြစ်ကြောင်း ၊ နေအ်မာသ်တော်များ နှင့် ထာဝရ ပြည့်စုံနေသည့် ဂျန္နတ်(သုခဘုံ) ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်လိုကြောင်း၊ ဥာဏ်ပညာပြည့်စူံမှုကို ပြသမှုတို့ကို လက်တွေ့ ဆောက်ရွက်ပြရန်လိုကြောင်း တို့ကိုရှေ့ ရှု ပြီး ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အား ခင်ပွန်းသည်အဖြစ် လက်ခံတော် မူခဲ့ပါတယ်။
ဤအတွက်ကြောင့်လည်း ပထမဦးဆုံး အီမာန်သက်ဝင်ယူံကြည်လာသူ ၊ ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) အား ပထမဦးဆုံး ထောက်ခံ ဝန်ခံ အားပေး ခဲ့သူ၊ ပထမဦးဆုံးကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) နောက်မှ နမာဇ် ဝတ်ပြုခဲ့သူ အဆင့်ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်မ်မိုလ်မိုမေနီ ဟဇရသ် ခဒီဂျာသိုလ်ဂိုဗ်ရာ (စ.အ) သခင်မကြီး၏ဝဖါသ်တော်
မြောက်များစွာသော အထောက်အထားကျမ်းကိုးများမှသခင်မကြီး (စ.အ) ၏ ဝဖါသ်တော် ကို ဟိဂျရသ် မတိုင်မီ ၃နှစ်အလျင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုရေးသားထားကြပါတယ်။အထက်ပါ ကျမ်းကိုးများမှ သခင်မကြီး (စ.အ) ဝဖါသ်ဖြစ်တော်မူချိန် သက်တော် ၆၅ နှစ် ရှိနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အေဗ်နေအဗ်ဒွလ်ဗဲရ် အနေဖြင့် သခင်မကြီး (စ.အ) ဝဖါသ်ဖြစ်တော် မူချိန် ၆၄နှစ် နှင့်၆လ ရှိကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် ။
အချို့ ပညာရှင်များ အနေဖြင့် သခင်မကြီး (စ.အ) ၏ ဝဖါသ်တော် ကို ဟဇရသ် အဗူသွာလစ်ဗ် ၏ ဝဖါသ်တော် နှင့် နှစ်တစ်နှစ်တည်း ဖြစ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်သာ ကွာကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် ။
အေဗ်နေစအ်ဒ် အနေဖြင့် သခင်မကြီး ၏ဝဖါသ် သည် ဟဇရသ် အဗူသွာလစ်ဗ် ၏ ဝဖါသ်တော်ပြီးနောက် ၃၅ ရက် အကြာတွင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
သမိုင်းပညာရှင်များ အချို့ မှ လည်း ဟိဂျရသ် မတိုင်မီ ၃နှစ်အလျင် လမြတ်ရမ်ဇာန်၏ ၁၀ ရက်နေ့ကို သခင်မကြီး ၏ဝဖါသ် နေ့ အဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စလာမ်မီ ရီဝါယတ်တော်များ အရ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) သည် မိမိဝတ်ရုံတော်ကို ပထမဦးစွာ သခင်မကြီးအားပတ်ပေးတော်မူပြီး ဂျန္နတ် (အမတသုခဘုံ) မှ ဝတ်ရုံ ကို ၎င်း အပေါ်ထပ်၍ ပတ်ပေးတော်မူပြီး သခင်မကြီးအား သဖ်နာ တော်မူခဲ့ပါတယ်။ သခင်မကြီး သဖ်နာ ထားသည့်နေရာမှာ မက္ကာဟ် မြို့ အကျော် ရှိ ((ဟိုဂျွန်တောင်)) ရှိရာဒေသ ကဗဲရ်စတန် နေ မိုအလာ ဖြစ်ပါတယ်။
သခင်မကြီး၏ ရောင်ဇာတော် သည် ဟဂ်ျပြုသူများ အတွက်ဇေယာရသ်ပြုရသည့်သမိုင်းဝင်နေရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သခင်မကြီး၏ရောင်ဇာတော် နှင့် အစ္စလာမ့် သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးများသွာသည် ဆော်ဒီ ဝဟာဘီ အစွန်းရောက် မင်းဆိုးမင်းညစ် ဖြစ်တဲ့အာလေစအူးဒ် အာဏာ ရရှိလာပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏လက်ချက်ကြောင့် ပြိုဖျက် စော်ကားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး လွင်တီးခေါင်ပြင် ဘဝသို့ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် ဖက်မှ ဤ ဆော်ဒီ ဝဟာဘီ အစွန်းရောက် မင်းဆိုးမင်းညစ် ဖြစ်တဲ့ အာလေစအူးဒ် အပေါ်လအ်နသ် ထာဝရ ကျရောက်ပါစေ ။ ရောင်ဇာ တော်များ နှင့် အစ္စလာမ်အဆောက် အဦးများကို ထိန်းသိမ်း တန်ဖိုးထားသည့်အစ္စလာမ်မီ အစိုးရ အသွင်ကို အမြန်ဆုံးပြောင်း လည်းပေးသနား တော်မူပါစေ။ ဤ ဆော်ဒီ ဝဟာဘီ အစွန်းရောက် မင်းဆိုးမင်းညစ်များကို ဖယ်ရှားပေးသနားတော်မူပါ။